" Soaring to Excellence "
You can do your certification with in-class. The process is easy, just visit us at Brain Box Acumen, School of Management.
EXECUTIVE ADVANCED DIPLOMA (MANAGEMENT)
Mon, Sun - 9:00AM to 8:00PM
CHOOSE YOUR PROGRAMS Providing Higher Education
MBA ဆိုတာ မခက်ခဲပါ Asean Economic Community မှာစီးမျောဖို့ ခေတ်ကို မျက်ခြေမပြတ် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ MBA တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အရောက်လှမ်းခဲ့ပါ
“The American International Institute, USA က ပေးအပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် Executive Diploma တွေကို မန္တလေးမြို့မှာ လေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုရင်…..”
“စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့် အောင်မြင်မှုရရှိစေရန် လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားရန်၊ “
We focused on education for executives, strategy development, research and knowledge creation.
စာရေးသက် ၁၃ နှစ် (၂၀၀၄-၂၀၁၇) အတွင်း မှာ ဂျာနယ်တွေမှာ ဆောင်းပါး အတော်များများ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ..။ သိမ်းထားမိတာလဲရှိ.. ပျောက်ပျက်သွားတာလဲ ရှိ..။ ဒီတစ်ခါတော့ဖြင့် စုစုစည်းစည်းလေး လုပ်ဦးမှ လို့ ကြံမိရဲ့..။ အားပေးသူက ဦးခင်မောင်မြင့် Khin Maung Myint လက်တွဲ ခေါ်ယူသူက ကို ညွန့်မင်း Nyunt Min ...။ စာ အုပ်ဖြစ်မြောက်ရေး အစအဆုံး သူပဲ စီစဉ်တာ..။ မျက်နှာဖုံး ပန်းချီက ဆရာ အံ့ Artist Ant Tin Aung ..။ အဲဒါလဲ ကိုညွန့်မင်း စီစဉ်တာပါပဲ..။
Happy Sweet December ကို ကြို ဆို တာပါ..။
Address : Zaw Gyi Center (၄ လွှာ)၊ ၆၅လမ်း၊ အိန္ဒိယကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတောင်ဘက်၊ ၁၀၂(A)နှင့် ၁၀၃လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
Phone : 09678456745
Mail : info@brainboxacumen.edu.mm
Facebook Page Brain Box Acumen
Viber Number 09678456745
Location Map See Location
© 2021. All Rights Reserved | Design by MMS IT